कांग्रेसमा चाकडी, नातावाद र स्वार्थको विष वृक्ष झ्यांङगियो: गुरुङ « Bikas Times
कांग्रेसमा चाकडी, नातावाद र स्वार्थको विष वृक्ष झ्यांङगियो: गुरुङ
मिति: June 1, 2018
पोखरा । नेपाली कांग्रेस कास्कीको जिल्ला सम्मेलनको यस अवसरमा जननायक स्व। वी।पी कोईराला, लौह पुरुष स्व। गणेशमान सिँह, सन्त नेता स्व। कृष्णप्रसाद भट्टराई, स्व।सुर्वण शम्शेर, स्व।गिरिजाप्रसाद कोईराला, स्व।महेन्द्रनारायण निधि, स्व। शैलजा आचार्य लगायतका दिवंगत नेताहरु र प्रातःस्मरणिय सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु ।
जव म आफ्नै अतित तिर फर्केर हेर्छु–जीवनका अनेकौं उतार चढावहरु देख्छु । वाराही स्कुलमा पढन गएको यौटा फुच्चे केटो–नीलकण्ठ शर्मा जस्ता प्रजातन्त्रप्रेमी शिक्षकहरुको प्रभावमा परेर जानि नजानि प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनाको संघर्षमा होमिन पुग्छ । लाहुर जाने र सुखी समृद्ध जीवन वाँच्ने सपना साँच्ने वेलाको एक किशोर पंचायती सत्ताको विरुद्ध संघर्षको लागि संकल्प लिन्छ । म अहिले पनि विचार गर्छु,– गरिवी र अभावमा हुर्केको म जस्तो केटोलाई के कुराले छोयो ? लाग्छ,– यौटा आर्दशले मलाई आकर्षित ग¥यो । राष्ट्रको विकासका लागि प्रजातन्त्रको अपरिहार्यता,–सायद त्यो आर्दशले म सवैभन्दा वढि प्रभावित भए । यसरी सक्रिय राजनीतिमा लागेको पनि आज लगभग ५० वसन्त व्यतित भईसकेको छ । वितेका यी ५० वर्षमा कति पटक त म मृत्युको मुखमा पुगेर फर्केको छु । विरोधी राजनैतिक शक्तिहरुवाट म माथि कति पटक सांघातिक प्रहार भयो,–त्यो मैले गनेको छैन् । प्रजातन्त्र पूर्नस्थापनापछि कतिपय उत्तरदायित्व वहनको अवसर मैले पनि पाएको छु । यस्ता अवसरहरुमा म वाट पनि कमीकमजोरीहरु भएका छन् । मेरो क्रियाकलापवाट पार्टी र साथीहरुमा प्रतिकुल प्रभाव पनि पर्न गएको होला । त्यसका निमित्त म विनम्रतापूर्वक क्षमा याचना गर्न चाहन्छु । तर म सत्य निष्ठापूर्वक भन्छु– नियतवस पार्टीको हीत विरुद्ध म कहिल्यै लागेको छैन र लाग्दिन पनि ।
मेरो क्रियाशील राजनैतिक जीवनको ५० वर्षमा कांग्रेस आज जस्तो कमजोर अवस्थामा कहिल्यै पुगेको थिएन भन्ने मलाई लाग्छ । निर्वाचन परिणामकै आधारमा मात्रै म यो ठम्याईमा पुगेको भने होईन् । पार्टीको साँगठनिक अवस्था, आर्दशताको रक्षा र सैद्धान्तिक रुपमा समेत पार्टी कमजोर भएको छ । संविधान निर्माण हाम्रै नेतृत्वमा भयो, तर संविधानमा रहेका कतिपय प्रावधानहरु हाम्रो आर्दश अनुकुल भयो.भएन भन्ने कुरामा हामी कति सचेत हुन सक्यौ ? हाम्रै नेतृत्वमा निर्वाचनहरु सम्पन्न भए । तर त्यसको जस हामीले किन पाएनौ ? पार्टीमा पदाधिकारीहरुको चयन समयमा किन हुन सकेन ? किन टिकट वितरणमा आर्थिक चलखेलको कुरा चर्चित रह्यो रु नातावाद र गुटवन्दी किन वनमारा झार जस्तो फैलियो ? किन सिँगो पार्टीपंत्ति प्रतिरक्षात्मक स्थितीमा पुग्यो रु यी र यस्ता अनेकौं प्रश्नहरुले उत्तर खोजिरहेका छन् । शुद्ध कांग्रेस भएर कांग्रेसमा वाँच्न सकिन्न रु कुनै न कुनै नेताको दौराको फेर नसमाति वैतरणी तर्न सकिन्न भन्ने मान्यता स्वंय पार्टीको लागि हलाहल विष समान भएको तथ्यका प्रति नेता गणको आँखा चिम्ल्याई रहस्यमय वनेको छ । निर्वाचनमा भएको अन्तर्घात क्षम्य नहुनु पर्ने हो, तर आज त्यो समेत क्षम्य वनेको छ । कांग्रेस संकटमा परेको यो क्षणमा पनि सत्य नवोले कहिले वोल्ने रु चिन्ता र चिन्तन गर्न छोडेर चाकडीमा लाग्ने वेला होईन यो । आरोप र प्रत्यारोपको संकिर्णतामा डुवेर वस्ने वेला पनि होईन यो । तर गम्भीर समीक्षा सहितको भविष्यको मार्ग प्रशस्त गर्नका निमित्त ईमान्दारितापूर्वक गृहकार्य गर्नुपर्ने वेला भएको छ । त्यसैले शहिदहरुलाई साँक्षी राखेर आत्माको आवाज मुखरित गर्न म सवैसंग आग्रह गर्न चाहन्छु ।
दरवार हत्याकाण्डपछि राजसंस्था प्रति जनआस्था अत्यन्त कम भयो । त्यसमाथि चिठ्ठा परेर राजा भएका ज्ञानेन्द्रको मुर्खताले गणतन्त्र मुलुक कै एजेण्डा वन्न गयो । कांग्रेस पनि समयको आव्हानका विरुद्ध हुने कुरै भएन् । तर संघियता र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिनु अघि पार्टीले गंभिरतापूर्वक सोच्नै पथ्र्यो । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर कसका पक्षमा हामीले आत्मसमर्पण गरेको हो ? प्रजातन्त्रको सौन्दर्य भनेको विचारको वहुलता पनि हो । राजनैतिक दलहरुको आफनो सिद्धान्त निर्माण गर्न स्वतन्त्रताका विरुद्ध संविधानलाई उभ्याएर हामी प्रजातन्त्रलाई धरापमा पार्ने षडयन्त्रको सहयोगी वन्न पुगेका छौ । भावि पुस्तालाई हामी संविधान निर्माणको वेला कुन सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएका थियौं भनेर भन्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छौं । अहिले कांग्रेस गर्विलो ईतिहास र धुमिल वर्तमान भएको पार्टीमा रुपान्तरण भएको छ । नेता ज्यूहरु भन्नुहोस्– कांग्रेसको सिद्धान्त के हो र एजेण्डा के हो रु यो पार्टी अरुको एजेण्डाको भारी वोक्ने परिस्थितीमा कसरी पुग्यो रु पार्टी आज राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय चक्रव्यूहमा फसेको छ,– के यसको नियती अभिमन्युको नियति हो ?
एक वर्ष भयो,–स्थानीय सरकारको गठन भएको । जनताले स्थानीय सरकार गठन पश्चात अपेक्षा गरेको छिटो छरितो सेवा, सुशासन, तीव्र विकास र समृद्धिको सपना नागढुङगा–कलंकी मार्गमा उडेको धूलो जस्तो भएको छ, तर कांग्रेस मौन छ । महंगी वढेको वढ्यै छ,–तर कांग्रेस मौन छ । विदेशी प्रभुको अगाडि लम्पसार छ सरकार,–तर कांग्रेस मौन छ । अव वक्तव्य र विज्ञप्तीको झारा टार्ने खेलले कांग्रेसमा उत्साहको रक्तसंचार हुन सक्त्तैन । संवैधानिक तथा अन्य महत्वपूर्ण निकाय नेतृत्वविहिन छ,–मानौ कांग्रेसलाई थाहा नै छैन र उ मौन वसेको छ ।
ओली नेतृत्वको यो सरकार शुरु देखि नै राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वार्थ साधनका रुपमा उपयोग गर्न अग्रसर छ । आफु सत्तामा आउनासाथ ढिकुटी रित्तो भएको प्रचार गर्ने र त्यही धरातलमा पाँच वर्ष भित्र प्रतिव्यक्ती आय दोव्वर पु¥याउने भ्रम फिजाईरहेको यस सरकारलाई मुख भरि जवाफ दिन किन पार्टी नेतृत्व अग्रसर भएको छैन् ।
नेता गण .आज पार्टीवाट “आर्दश, नैतिकता, ईमान्दारिता, साहस, लगन र संघर्षशिलता विस्तापित भएको छ भने,– लोभ लालच, चाकडी, नातावाद र स्वार्थको विष वृक्ष झ्यांङगिएको छ । यो विष वृक्षलाई समयमा नै ढाल्न सकिएन भने सर्वसत्तावादको स्वागत गर्नुको विकल्प हामीसंग हुने छैन् । त्यतिखेर सर्वसत्तावाद तपाईहरुको घाँटीको नाप लिईरहेको हुनेछ, र हामी लाचार तपाईहरुको अवसानको दिन गन्ती गरिरहेका हुनेछौं ।”
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीको अहंकारको रापले डढनु अघि नै रुखलाई शीतल छहारी दिने विशाल वट वृक्षमा रुपान्तरण गर्ने अभियानको आजैदेखि आरम्भ गरौं । तपाईहरुको हात मिलाएर ङिच्च हाँसेको तथाकथित एकताको नक्कली फोटो होईन आम कार्यकर्ता पार्टीको हीतमा तपाईहरु एक भएको अनुभूति गर्न चाहन्छन् । कार्यकर्ता सार्थीहरु हामी कुनै अमुक नेताको गोजीमा अटाउने साना कदकोठीका भएर राष्ट्र र पार्टीको हीतमा कुनै योगदान दिन सक्तैनौं । नेताको होईन पार्टीको कार्यकर्ताका रुपमा आफुलाई रुपान्तरण गर्ने संकल्प गरौं ।
२०३७ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलका पक्षमा सुधार सहितको पंचायत पक्षमा भन्दा दस हजार भन्दा वढि मत प्राप्त गरेको जिल्ला हो कास्की । त्यसवेला आजको नेकपा वीजरुप तत्कालिन माले बहुदल धोखा हो भन्दै अप्रत्यक्ष रुपमा पंचायतको पक्षमा उभिएको थियो । कांग्रेस एक्लैको वुतामा त्यो जीत संभव भएको थियो । आज “कास्की कांग्रेस भूरे टाकुरे राजा हुने सपना वोकेर वाँच्नेहरुका कारण धेरै पछाडी परेको छ । क्षमता भएकाहरुलाई पार्टीवाट विस्थापित गरि आफ्नो मार्ग सुरक्षित पार्न खोज्नेहरुले अहिले थाहा पाएको हुनपर्छ,– आफन्तको कदकाठी घटाउँदा आफ्नो पनि साईज घटछ भन्ने कुरा ।” अहिले म तितो पोख्न चाहन्न । व्रह्माजीका तीन मुख जस्तो ने।वि।संघ कास्की समानान्तर रुपले गठित तीन समितिले अहिले प्रतिविम्वित गराएको समयका प्रतिको असंवेदनशिलताले म लज्जित भएको छु । कुन कुन कास्कीका वा केन्द्रका नेताले यो अपराधलाई आर्शिवाद दिनुभएको छ । तुरुन्तै वन्द गर्नुहोस् ।
कास्की कांग्रेसमा विचार मन्थन आवश्यक छ । विगतको निर्मम समीक्षा र आगतको लागि सुस्पष्ट मार्ग चित्रको खाँचो छ । हार्दिक एकताको आवश्यकता छ । म आस र त्रासवाट मुक्त भएर त्यसका लागि लाग्ने संकल्प गर्दछु । र सवैलाई कांग्रेसको पुर्नजागरणको महान अनुष्ठानमा सामेल हुन आग्रह गर्दछु ।
(नेता गुरुङले २०७५ जेठ १७ गते पोखरामा जारी नेपाली कांग्रेस कास्कीको जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा राख्नुभएको मन्तव्य )